6 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Heshay Nin Waligaa Ku Jeclaan Doona - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»6 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Heshay Nin Waligaa Ku Jeclaan Doona
6 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Heshay Nin Waligaa Ku Jeclaan Doona
Hani Osman Send an email
Waa inaan qiraa inay adagtahay helitaanka qof si dhab ah kuu jecel maantadan la joogo. Wanaaga uu leeyahay jacaylka iyo faa’idadiisa ayaa ah markaad ugu dambeyn hesho qof si dhab ah kuu jecel, waa jecleysan doontaa noloshaas iyo dareenkaas adigoo ku duceysan doona inaysan marnaba kaa dhammaan.
Waa kuwaan 6 calaamadood oo lagu garto inaad heshay nin waligaa ku jeclaan doona.
1. Kaama cararaayo markay dhibaatada ama culeyska bato
Fariimo Jacayl oo dareenkaaga dhaqaajinaya
Sadexda Magac Ee Ugu Xun:- Waligaa Magacyadaan Ha Ugu Yeerin Xaaskaaga
Ninka waligaa ku jeclaan doona ma cararaayo marka uu culeyska ama dhibka kordho. Haddii culeyska ku kordho xiriirka, si xushmad leh ayuu kaala hadlayaa isagoo dadaal dhab ah ku bixinaya sidii uu uxalin lahaa.
2. Dhibkaaga waa dhibkiisa
Ninka waligaa ku jeclaan doona marnaba kuuma ogolaan doona in dhibaatada ama culeyska aad kaligaa wajahdo. Haddii ay wax ku dhibayaan, sidoo kale isagana way dhibayaan. Had iyo jeer waa kan ku garab istaagi doona isagoo isku dayi doona inuu dhibkaas kaa caawiyo.
3. Wuxuu sameyn doonaa wax kasta si uu u saxo qaladaadkiisa
Ninka waligaa ku jeclaan doona wuxuu sameyn doona wax kasta si uu u saxo qaladaadkiisa. Haddii uu ku dhaawco, dhib walba ayuu mari doona si uu wax u saxo. Wuu murugoon doonaa haddii uu sameeyo wax ku dhaawaca isagoo sameyn doona wax kasta oo ay qaadato sidii uu u sixi lahaa qaladaadkaas.
4. Waa kuu daacad
Wiilka waligaa ku jeclaan doona ma ogolaanayao in dhexdiina lasoo galo. Mcino weyn ayaad ugu fadhisaa wuxuuna qiimeyn doonaa xiriirka.
5. Wuuu ogyahay waxyaabaha aad jeceshahay
Ninka waligaa ku jeclaan doona wuu ogyahay waxyaabaha aad jeceshahay. wuu ogyahay nooca cunnada aad jeceshahay, iyo waxyaabaha kale ee aad xiiseyso.
6. Ma filaayo inaad noqoto qof dhan kasta u wanaagsan
Ninka waligaa ku jeclaan doona marnaba kaama filan doona inaad dhan kasta ka wanaagsanaatid. Wuu ogyahay in qof kasta uu qalad sameeyo wuuna ku qosli doonaa qaladaadkaaga xittaa haddii ay dhaawaceen. Waxba qalbiga kuuguma heyn doonto.
3 Qaab oo haweeney ku diidan aad jacayl uga keensan karto
3 Arrimood oo kaa caawinaya inaad noqoto haweeney nin walba uu rabo
Heesta Ha Ooynine Aamus ee Zakariye Kobiye oo qoraal ah (Ka Bogasho Wacan)
Waa ka ogoow cudurka Kolestaroolka (Cholesterol)?!
Ladies, here is why it is okay to take a break from dating
Qaababka Ugu Wanaagsan Ee Lagu Ogaado In Qofka Aad Jeceshahay Uu Isagana Sidoo Kale Ku Jecelyahay
3 tips to avoid daytime sleepiness at work
Why you and your partner don’t need to speak the same love language
Daawo: Culumada Warsheekh oo ka qeyliyey ‘fisqi iyo fasahaad uga yimaada Muqdisho
Ka Fogoow Tobankaan Cunto Haddii Aad Uur Leedahay
Fatuma Gedi ‘reveals’ people behind sex video